२४ वर्षसम्म एउटै कोठा’मा एक पुरुष’लाई ब’न्ध’क ब’ना’ए’र यौ’न शो’ष’ण’स’हित च’र’म या’त’ना ! – Tufan Media News
२४ वर्षसम्म एउटै कोठा’मा एक पुरुष’लाई ब’न्ध’क ब’ना’ए’र यौ’न शो’ष’ण’स’हित च’र’म या’त’ना !
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ०८:०७
मंगलबार अपरान्ह साढे पाँच बजेतिर नेपालगन्जमा रहेको कालपृष्ठ दैनिकको कार्यालयमा एकजना ख्याउटे शरीर भएका मानिस रुन्चे अनुहारसहित आइपुगे । उनले काँधमा एक कालो झोला बोकेका थिए । शरीर फतक्क गलेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
परिचय सोध्दा उनले आफ्नो नामसमेत अनकनाएर भन्न सके । आमाबुबाको नाम र ठेगाना उनले बिर्सिसकेका छन् ।
उनले आफ्नो गाउँको ठेगानाबारे सानोमा सुनेको बताउँदै भने, खोटाङको चिसापानी गाविस हो भन्ने सुनेको,थिएँ?’
नाम विज्ञान कोइराला बताउने ती व्यक्ति आफू करिब १० वर्षको उमेर’मा अ’प’ह’र’ण’मा परे’को र त्यसपछिका २४ वर्ष ब’न्ध’क ब’ना’ए’र यौ’ न शो’षण’ गरिए’को ब’ताउँ’छ’न् । त्यसरी यौ’ न शो’ष’ण ग’र्ने’हरु वि’देशीहरु हुनसक्ने उन’को भनाई’बाट आ’शं’का हुन्छ ।
सुन्दा कुनै क’हालीलाग्दो चलचित्रको कथाजस्तो जीवन आफूले भो’गे’को ती व्यक्ति बताउँछन् । उनका खुट्टा’मा चु’रो’टले डा’मे’का दा’ग’हरु छ’न् । पेटमा तलदेखि छा’ति’सम्म चि’रि’एको दा’ग दे’ख्न स’किन्छ ।
करिब ९ वर्षको उमेरमा खोटाङबाट आमाबुवासहित काठमाडौंको सानेपा पुगेका विज्ञान एकदिन केही सामान किन्न गल्लीमा निस्केका बेला उनको अघि एक कालो गाडी आएर रोकियो । उक्त गाडीबाट तीनजना मानिसहरु निस्किए ।अचानक उनी’माथि कम्बलले ढाकियो र गाडीभित्र कोचियो ।
गाडीमा उनका आँखा र मुखमा पट्टि बाँधियो । आँखा खुल्दा उनी आलिसान महलजस्तो लाग्ने कुनै घरमा पुगेका थिए । त्यहाँ पुगिसकेपछि म चि’च्या’एँ । क’रा’एँ । यसरी कि’न ल्या’एको भनेँ? आमाबुवाकहाँ पुर्‍याइदिनुस् भनेँ । कसैले मेरो आवाज सुनेन,’यसो भनिरहँदा विज्ञानका ओ’ठ का’मिरहे’का थि’ए । आँखा’मा आँशु भने देखिएन । सायद आँशु सुकिसकेका छन् ।
घरमा पुग्दा उनले दुईजना महिला र एकजना पुरुष देखेको बताउँछन् । उनीहरु मसँग कुरा गर्दा नेपालीमै बोल्थे । तर आफू-आफू बोल्दा भने अर्कै भाषामा बोल्थे,’ उनले भने ।
एक भर्खरको बालक उनले त्यतिबेला आफूमाथि के भइरहेको छ ? भन्ने समेत ठम्याउन सकेनन् । उक्त आलिसान महलको एक को’ठा’मा आफूला’ई ब’न्ध’क ब’ना’एर राखिएको विज्ञान बताउँछन् । मलाई २४ वर्षसम्म एक को’ठा’मा ब’न्ध’क ब’ना’एर रा’खियो । अ’नि यौ’ न शो’ष’ण ग’रियो । यौ’ न स’ म्प ‘र्क ग’र्न न’मा’ने बि’ले’ड’ले चि’र्थे र त्यस’माथि चु’रो’ट’ले डा’म्थे…,’विज्ञान थप बो’ल्न सके’नन् । उनका खुट्टामा ठाउँ-ठाउँमा का’ला दा’गहरु दे’खिन्छन् ।
विज्ञानका अनुसार उन’लाई अ’प’ह’र’ण ग’र्ने महिला’सहित अरु म’हिला’हरु पनि उक्त घरमा पुग्थे । उन’को यौ’ न शो’ष’ण ग’र्थे । विज्ञान’ले भने, कालो छाला भए’का, घु’म्रे कपाल भए’का महिला’हरु पनि क’हि’ले’काहीँ आ’उँथे । सबै’ले मै’मा’थी ह’म ‘ला ग’र्थे ।’
उनलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिन अनेक इ’न्त’जाम गरिए’को थि’यो । बाहिर केही पनि नदेखिने कोठामा राखिएको थियो । घर कतितले थियो ? भन्नेसमेत उनलाई याद छैन । घरमा १५-२० वटा कोठा हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।बाहिर तीन चारवटा च्यानल गेट राखिएको थियो । अ’प’ह’र’ण ग’र्ने पु’रुष कहिले’काहीँ आउँथ्यो । दुईजना म’हि’ला’हरु पालो मिलाएर घरबाहिर निस्कन्थे । त्यसैमाथी प्रायः उन’लाई बे’हो’ स हु’ने सु’ई ल’गाएर राखिन्थ्यो । भक्का’निँदै विज्ञानले भने, २४ वर्षसम्म मैले घाम कस्तो हुन्छ ?आकाश कस्तो हुन्छ? तारा कस्तो हुन्छ ?जून कस्तो हुन्छ ? बाहिरका मान्छे कस्ता हुन्छन् ? थाहा पाइँन ।’
एकदिन घरमा एकजना महिलामात्रै भएको मौकामा उनले भाग्ने उदेश्यले महिला’सँग भि’ड्न खो’जे । महिलाले उनको घुँडा’मूनि च’क्कु’ले घो’पि’दि’इ’न् । घुँडामुनि उक्त घा’उ’को दा’ग अ’झै रहेको छ । त्यसपछि उनको भाग्ने हिम्मत र संजोग दुवै मिलेन ।
उनलाई सानो हुँदा कहिलेकाहीँ चिया र खाना बनाउन लगाउँथे । ठूलो भैसकेपछि उन’को ल’गा’ता’र यौ’ न शो’ष’ण मा’त्रै भ’इ’रह्यो ।
२४ वर्षमा उनले य’ति या’त’ना पा’ए कि अहिले कोही महिला दे’ख्यो कि ड’र ला’ग्ने गरे’को बताउँछन् । कोही मान्छेको पनि विश्वास लाग्न छोडिसक्यो,’उनले भने ।
विगत २४ वर्षमा उनकोस’र्वस्व लु’टि’यो । यतिसम्म कि उनले आफ्नै आमाबुवाको नामसमेत याद राख्न सकेनन् । साथीसँगी कसैको नाम उनलाई याद छैन । धेरै बेर सम्झिने कोसिस गरेर उनले भने, त्यतिबेला एउटी बहिनी थिई । उसको नाम तुलसी हो की यस्तै थियो ।’
उनीसँग हाल बचेको चिज भनेको मात्र उनको नाम मात्र हो । कहिलेकाहीँ त यही नाम पनि बिर्सिंन्छु कि भन्ने डर लागिरहन्छ । कहिलेकाहीँ आफैलाई चिन्दिनं कि भन्ने डर लाग्छ,’ लामो सुस्केरा तान्दै उनले भने ।
२४ वर्ष’सम्म विज्ञान’को शो’ष’ण भ’यो । करिब चार वर्षअघि उन:को पे’ट’समेत चि’रि’यो । किन चि’रि’यो ? उनी भन्न सक्दैनन् । आजभोली अलिकति खाना बढी भयो, पानी बढी भयो भने घाँ’टी’मा सि’न्का हान्छ । पि’सा’ब फे’र्न गा’ह्रो हु’न्छ । चिया पिउन भने तलतल लागिरहन्छ,’ विज्ञान भन्छन् ।
पेट चि’रि’ए’को घा’उ नि’को हु’न एक वर्ष लागेको उनी बताउँछन् । डा’क्टरहरु पनि घरमै आउँथे । अर्कै भाषा बोल्थे । सब चिज घरभित्रै हुन्थ्यो,’ उनले हातमा बनाइएको ट्याटु देखाउँदै भने, यो पनि उनीहरुले आफै बनाइदिएका हुन् । मैले उनीहरुलाई मेरो नाम कहिल्यै भनिनं । त्यसकारण ट्याटुमा नाम दीपक लेखिदिए ।’
कसरी पुगे नेपालगन्ज ?
करिब ६ दिनअघि राति सुतेको समयमा एकाएक उठाएर विज्ञानलाई गाडीमा हालियो । राति साढे दुईबजेतिर हुनुपर्छ । म त्यति’बेला बे’हो’स् थि’एं कि जस्तो लाग्छ,’विज्ञानले भने, गाडीमा हालेर करिब दुई घण्टा जति कुदाइयो । अनि एक घना जंगलको बिचमा छाडेर उनीहरु हिंडे,’ उनले भने ।
विज्ञानका अनुसार उनी कमजोर हुँदै गएको,उमेर ढ’ल्किन लागेको, पे’ट चि’रे’को र नि’रन्तर बि’रामी प’रिरहने भएका कारण उनीहरुले अन्तमा जंगलमा छाडेर गएका हुनसक्छन् । पहिले मोटोघाटो र हृष्टपुष्ट थिएँ । पे’ट चि’रिस’केप’छि निरन्तर दु’ब्ला’उँदै र क’म’जोर हुँदै गएँ,’ उनले भने ।
त्यो जंगल काठमाडौंको बल्खु आसपासको रहेको विज्ञान बताउँछन् । उनलाई जंगल काट्नै पाँच घण्टा लाग्यो । अग्लो पहाड काटेर म एक मान्छे नै मान्छे भएको चोकमा आइपुगें । त्यहाँ यो कुन ठाउँ भनेर सोध्दा एकजनाले बल्खु हो भनेका थिए,’ उनले भने ।
न जाने गन्तव्य न होस्को ठेगान । गले’को शरीर, मतिष्क’मा अ’ने’क त्रा’स, आ’शं’का र अवि’श्वा’स बो’केर शहर’मा दुई घण्टा कता हो कता हिडे । त्यसपछि एउटा ट्रकको पछाडि झुण्डिएर उनी तराईं झरे । ट्रकबाट झर्दा अँध्यारो भइसकेको थियो। कुन ठाउँ हो थाहा भएन । सडकमा रुँदै हिडिरहेको थिएँ । एकजना दाई आएर सोध्नुभयो । सबैकुरा बताएँ । उहाँले मिडियामा जाउ भनेर भन्नुभयो । त्यो दिन पहिलोपटक मिडिया शब्द सुनेको थिएँ,’उनले भने, कहाँ हो ? के हो?मिडिया थाहा थिएन । उहाँले पाँच सय रुपैयाँ भारु दिनुभयो। त्यसैले खाना खाँदै दुईदिन हिँडेर यहाँ आइपुगें,’ विज्ञानले भने ।
नेपालगन्जमा पनि उनी करिब तीन दिन यताउता भौतारिए । नेपालगन्ज किन आउनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, मलाई थाहै छैन म कहाँ आइपुगेको छु । जता गाडी र खुट्टाले डोर्‍यायो त्यतै हिँड्दै आएँ,’ उनले भने, यहाँ आइपुगेपछि आमा बुवाको अनुहार देखिहाल्छु कि भनेर पुरुषका अनुहार हेर्दै हिंडे । आमाको अनुहार देखिहाल्छु कि भनेर महिलाको अनुहार हेर्दै हिंडे । तर भेटिनं,’ उनले भने ।
अहिले त महिलाहरुलाई देख्यो भने आमा भेट्ने आशाभन्दा तीनै बन्धक बना’एर शो’ष’ण ग’र्ने महिला’को अ’नुहा’र आँ’खाअ’घि आउने गरेको विज्ञान बताउँछन् । मान्छेको विश्वास लाग्न छाडिसकेको उनी बताउँछन् । एकदुई ठाउँमा पुलिसलाई आफ्नो पीडा सुनाएर सहयोग माग्न खोजें । तर, हामी के गर्न सक्छौँ र ? भने’ उनले भावुक हुँदै अनुभव सुनाए ।
मंगलबार नेपालगन्जको सेतु विक चोकमा पुगेका उनले मिडिया कहाँ छ? भनेर एक प्रहरीलाई सोधे । चोकमा खटेका प्रहरीले कालपृष्ठको कार्यालय देखाईदिए । कालपृष्ठले उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई सुम्पिएको छ ।
साभार : मिडिया सेन्टर / कालपृष्ठ राष्ट्रिय दैनिक
सोती घट’ना : अदालतमा
यिनै हुन् पूर्णचन्द्र तामाङ
जब भरतमणिले पूर्वयुवराज पारससँग
पाँचथरमा भयानक बस दु’र्घटना
मेरो बैसाखमा बिहे फिक्स